Cabsi ka taagan degmada Afgooye | SMC
Home WARARKA MAANTA Cabsi ka taagan degmada Afgooye
Cabsi ka taagan degmada Afgooye
Saacadihii la soo dhaafay waxaa bilowday cabsi xoogaan oo soo wajahay dadka ku haray degmada afgooye iyo degaanada kale ee ku hareereysan,ka dib markii ay kordheen biyaha wabiga shabeelle oo horay ugu Fatahay degaanno badan oo ka tirsan Gobolka Shabeellaha Hoose.
Nabadoon Ibrahim Kuuloow Axmed oo ka mid ah dadka degaanka ayaa sheegay in biyaha wabiga ay la socdaan xayawaano dad cun ah.
“Waxaan ka cabsi qabnaa inay ka dhashaan cuduro ka dib markii dhammaan adeegyadii caafimaadka ay biyaha qaadeen waana dhibaatooyin nagu soo foodleh hase ahaatee waxaana u baahnahay in nagala soo gaaro” ayuu yiri nabadoon Ibraahim Kuuloow.
Inta badan xaafadaha ay ka koobantahay Degmada Afgooye ayaa laga barakacay kaddib markii ay saameeyeen fatahaadaha wabiga shabeellle waxaana socda gurmad ay sameeynayaan Dad shacab ah iyo kan degmada oo wada qeylo dhaan iyo gurmad si wax looga qabto xaalada cakin ee ka taagan gobolka Shabeellha Hoose.
Previous articleKhayre waa dambiile Qaran wuxuuna mudan yahay maxkamadeen
Next articleKulan Muqdisho uga socda Madasha iyo guddoonka Golaha Shacabka